Dusha Kit sii kordhaya
Baxsan Mount Kit
Waxaan nahay saaraha xirfad leh koox aad u fiican, kuwa xirfadda iyo khibradda leh ee R & D, iibka iyo taageero farsamo.
Waxaan helay ISO-9001: 2015 nidaamka maaraynta tayada shahaado, sidoo kale waxaan si adag u leeyihiin xakameeyo on habka wax soo saarka iyo tayada wax soo iibsiga qalab.
Under xaaladaha gaarka ah, ku salaysan design wax soo saarka iyo horumarinta,-waxqabadka sare xawaaraha horumarinta wax soo saarka iyo tayada shaqo saarka tartan si ay ula kulmaan iibsadaha u baahan yahay.
"Macaamiisha ayaa had iyo jeer waa xaq", waxaanu macaamiisha iyo tayada our xarunta shaqada.
Eastrong Laydhka Co., Ltd. waa casriga LED saaraha nalalka a iskudhafka la R & D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga, kaas oo la helay ISO-9001: 2015 nidaamka maaraynta tayada shahaado. Warshadda ayaa waxaa la aasaasay sannadkii 2017, oo ku yaalla Dongguan, Gobolka Guangdong. Sida soo saaraha ah ee caalamka LED nalalka, shirkadda ayaa kala duwan ee wax soo saarka, ay ka mid yihiin: nalalka guddi LED, nalalka tube LED, IP65 LED saddex-caddayn nalalka, nalalka strip LED, LED nalalka qarax-caddeynta, nalalka oo daahirinta ku LED, nalalka bifidus LED, nalalka degdeg ah LED, laambad UV LED, LED laambad saqafka,-bay sare laambad,-bay sare laambad qalabka iyo alaabooyinka kale ee nalalka fog.
Light IP65 Tri-caddayn
oo tayo sare leh Panel Light
Ma jeclaan lahayd in aad ogaato ugu dambeeyay isbeddellada, tabo cusub iyo war ku saabsan warshadaha ee nalalka LED? Haddii ay sidaas tahay, fadlan fiiro in ay diiradda saaraan Eastrong Laydhka, waxaan sii wadi doonaa si ay u daabacaan dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan LED iyo iftiiminta ganacsiga & warshadaha. Fiiri news our ugu dambeeyay ee hoos ku qoran:
Eastrong (Dongguan) Laydhka Co., Ltd
Products Hot - Sitemap - amp Mobile hoggaamiyo toosan Light , Aluminum hoggaamiyo toosan Laydhka , High Bay Light u qaada, Office Led Linear Light, Ufo High Bay 200 Watt, Wareegtada High Bay Light ,